प्रकट रूपमा गत चुनावको विषय यो रहेको थियो– वामपक्षीय गठबन्धन र नेका पक्षीय गठबन्धन मध्ये कसको विजय हुन्छ ? तर त्यसको मुख्य विषय त्योभन्दा अर्को र बेग्लै थियो । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको विजय हुनेछ वा पराजय ? नेकाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा राजावादी, पृथकतावादी (मधेशवादी), भारतपरस्त तत्वहरू सामेल थिए । उनीहरूको विजय भएको भए गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा नै गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना थियो । उक्त प्रश्नहरूमा वाम पक्षधर गठबन्धनका नीति र भूमिका अपेक्षाकृत सही र प्रगतिशील थिए, यद्यपि उनीहरूमा भएका ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान रहने गरेको छ, तैपनि समग्र रूपमा वाम पक्षीय गठबन्धनले उक्त प्रश्नहरूमा बढी सही र प्रगतिशील दृष्टिकोण राख्दथ्यो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले नेका पक्षीय गठबन्धन होइन, वाम पक्षीय गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेबारे नीति अपनाएको थियो ।
चुनावमा नेकाको देशव्यापी रूपमा जसरी हार भयो । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ त्यो सित तालमेल गरेर चुनाव लडेको भए हामीले प्युठान र बागलुङमा पनि चुनाव जित्न सक्ने थिएनौँ । तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, एकातिर, नेका पक्षीय गठबन्धनले अपनाएका प्रतिगामी नीतिहरू र, अर्कातिर, एमाले र माओवादीका बीचमा वाम पक्षीय गठबन्धन बनेपछि देशमा चलेको वाम पक्षीय लहरका पृष्ठभूमिमा हामीले नेकासित चुनावी तालमेल गर्ने नीति अपनाएको भए दीर्घकालीन रूपबाट पनि हाम्रो राजनीतिक प्रतिष्ठा र हाम्रो जनआधारमा पनि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने थियो । स्पष्ट थियो, त्यो अवस्थामा जनतामा ठुलो बदनामी हुनुका साथै पार्टी पङ्क्तिबाट पनि पार्टी केन्दूको भूमिका र नीतिहरूको पनि व्यापक विरोध हुने कुरा निश्चित थियो । त्यसैले चुनावको बेलामा पार्टीले तालमेलको जुन नीति अपनायो, त्यो सही भएको कुरा व्यवहारबाट नै प्रष्ट भई सकेको छ ।
एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी नभइकनआन्दोलन वा चुनावमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु सम्भव हुँदैन । त्यसैले पार्टीको अनुशासन र एकतामाथि पनि हामीले सधैँ जोड दिनु पर्दछ । अब हामीले एक वर्षमा पार्टीको आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ठेगान गरेका छौँ । महाधिवेशनले राष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रिय भेला वा केन्द्रीय समितिका बैठकहरू जस्तै तात्कालिक र सामान्य नीति र कार्यक्रम निर्धारित गर्ने जस्तो काम मात्र गर्दैन । त्यसले अपेक्षाकृत लामो अवधिका लागि नीति र कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दछ । त्यसैले महाधिवेशनमा स्वस्थ र सन्तुलित प्रकारले छलफल र निर्णयहरू हुनुपर्दछ । स्वस्थ र अनुशासित वातावरणमा नै त्यो कार्य हुन सक्दछ । तर हाम्रो पार्टीमा जस्तो कि हामीलेपछि चर्चा गर्ने छौँ, अहिले एकता र अनुशासनमा कैयौँ समस्याहरू देखा परेका छन् । त्यो अवस्थामा महाधिवेशन हुने हो भने त्यसमा स्वस्थ सन्तुलित प्रकारले विभिन्न विषयहरूमा चर्चा, छलफल र निर्णयहरू हुन मुश्किल पर्नेछ ।
२. हाम्रो पार्टीले एकातिर, रणनीतिक र वर्गीय आधारमा र, अर्कातिर, तात्कालिक राजनीतिक आधारमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसित बेग्ला–बेग्लै प्रकारले एकता वा सङ्घर्षको नीति निश्चित गर्ने गर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टी मजदुर वर्गको पार्टी हो र किसान वर्ग नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्र शक्ति हो । राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग, धनी किसान वा निम्न पूँजीपति वर्ग नयाँ जनवादी क्रान्तिका मित्र शक्तिहरू हुन्, यद्यपि ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रकारका । उनीहरूको सामन्त वर्ग तथा दलाल नोकरशाही पूँजीपतिसित सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । हाम्रो पार्टीले माओवादी केन्द्र समेतलाई निम्न पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस कारण वर्गीय रूपमा उनीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिका मित्र शक्तिहरू हुन् । आफ्नो वर्गीय चरित्र अनुसार उनीहरूमा सामन्त, दलाल र नोकरशाही वर्गहरूसित तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने प्रवृत्ति हुन्छ । उनीहरूका गत कालमा त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने गरेका थिए र भविष्यमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सामन्त र दलाल पूँजीपति वर्ग नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुश्मन शक्तिहरू हुन् । नेकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यस कारण नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा वर्गीय रूपमा त्यो हाम्रो दुश्मन शक्ति हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेशवादीहरू पनि दुश्मन शक्तिहरू हुन् । राप्रपाले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने उद्देश्य राख्दछ । मधेशवादी सङ्गठनहरूको निर्माण नेपालमा भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्न नै भएको हो । त्यसले मुख्य रूपले राष्ट्रिय विखण्डनमा जोड दिन्छ । त्यसैले त्यो पृथकतावादी राजनीतिक सङ्गठन हो । सधैँ झैँ यहाँ हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि मधेशवादी भनेर हामीले मधेशका सम्पूर्ण जनतालाई लिदैनौँ र हामीले भारतीय समर्थनमा नेपालमा पृथकतावादी उद्देश्य पुरा गर्न काम गर्ने मुठ्ठीभर भारतपरस्त तत्वहरूलाई नै मधेशवादीका रूपमा लिएका छौँ ।
३. कुनै खास बेलाको राजनीतिक स्थिति र आवश्यकता अनुसार विभिन्न मित्र वा दुश्मन शक्तिहरूसित तात्कालिक रूपमा एकता वा सङ्घर्षको नीति अपनाउने गरिन्छ । माओवादी केन्द्र, एमाले ढुलमूल र सम्झौतापरस्त मित्र शक्तिहरू भएकाले र नेका समेत दुश्मन शक्ति भएकाले उनीहरूसित कुनै पनि अवस्थामा कार्यगत एकता वा तालमेल नगर्ने नीतिलाई हामीले गलत मान्दछौँ । हाम्रो संयुक्त मोर्चासम्बन्धी नीति माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण अनुरूप नै छ । दुवैसित आवश्यकता अनुसार एकता र सङ्घर्षको नीति अपनाइन्छ । तर उनीहरूसित अपनाइने त्यस प्रकारको एकता वा सङ्घर्षको प्रकृतिमा मौलिक अन्तर पनि छ । माओले स्पष्ट गरे अनुसार मित्रशक्तिहरूप्रतिको संयुक्त मोर्चाको नीति एकता–सङ्घर्ष–एकतामाथि आधारित हुन्छ भने दुश्मन शक्तिहरूप्रतिको नीति सङ्घर्ष–एकता–सङ्घर्ष । त्यसरीमित्र शक्तिहरूसितको संयुक्त मोर्चाको नीतिमा एकताको पक्ष प्रधान हुन्छ भने दुश्मन शक्तिहरूप्रतिको नीतिमा सङ्घर्षको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । मित्रशक्तिहरूसितको सम्बन्धमा एकतर्फी रूपमा एकतामा जोड दिने र दुश्मन शक्तिहरूसित पनि एकतर्फी रूपमा सङ्घर्षमा जोड दिने सोचाइहरू गैर माक्र्सवादी–लेनिनवादी तथा अधिभूतवादी विचारहरू हुन् ।
९. जुन पक्षसित गत चुनावका बेलामा तालमेल भयो, उनीहरूसित नयाँ सन्दर्भ वा नयाँ राजनीतिक आवश्यकता अनुसार अहिलेको एकताको नीति पुनः सङ्घर्षमा बदलिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । २०४६ सालको आन्दोलनमा गिरिजा प्रसादको नेतृत्वको नेकासित हाम्रो कार्यगत एकता वा आन्दोलन या कोअर्डिनेसन भयो । तरपछि पुनः उनको नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध नौ वामले ढाई वर्षसम्म संयुक्त सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो । हाम्रो कुनै पक्षसित कायम भएको एकता लामो समयसम्म चली रहोस् र त्यो स्थायी प्रकृतिको होस् । त्यसका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । तर राजनीतिक स्थिति र कुनै पक्षको भूमिकामा आउने परिवर्तन अनुसार कुनै पक्षसितका एकता वा सङ्घर्षका नीतिहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि पैदा हुन सक्दछ । कैयौँपल्ट एकता सङ्घर्षमा र सङ्घर्ष एकतामा रूपान्तरित हुन सक्दछन् । माओले च्याङकाइसेकसितको संयुक्त मोर्चालाई कायम राख्नेर संयुक्त सरकार बनाउने पनि प्रयत्न गरेका थिए । तर च्याङकाइसेकको भूमिकाका कारण नै त्यो एकता कायम हुन सकेको थिएन । पञ्चायती कालमा चौम, सर्वहारा श्रमिक सङ्गठन, मोटो मशाल आदिसित हामीले कार्यगत एकता गरेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको गठन गरेका थियौँ । हामीले संविधान सभाको नारा दिएपछि उनीहरू हामीसितको कार्यगत एकता कायम राख्न तयार भएनन् । हामीले संविधान सभाको प्रश्नमा मतभिन्नता भए पनि त्यसलाई कायम राख्नु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएका थियौँ । १७ दलको संयुक्त आन्दोलन पनि करिब दुई वर्षसम्म चलेको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो प्रयत्न थियो । तरपछि त्यसका धेरै पक्षहरू माओवादीसित मिल्न गएपछि टुटेको थियो । त्यस प्रकारका अरू पनि कैयौँ उदाहरणहरू छन्, तैपनि भविष्यमा कुनै पक्षसितको कार्यगत एकता टुट्न सक्ने आशङ्काका कारणले कुनै खास बेलाको राजनीकि आवश्यकता अनुसार बनेको कार्यगत एकतालाई पनि निषेध गर्नु सही हुँदैन । यस सन्दर्भमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने कुनै बेलामा कुनै खास पक्षसित भएको कार्यगत एकता वा तालमेल सारमा त्यो पक्षसित कार्यगत एकता वा तालमेल नभएर कुनै खास राजनीतिक आवश्यकता पुरा गर्न नै बनेको हुन्छ र त्यो राजनीतिक आवश्यकता नै मुख्य पक्ष हो । उदाहरणका लागि २०४६ सालमा नेकासित हामीले जुन कार्यगत एकता वा कोअर्डिनेसन गर्‍यौँ, त्यो मूल रूपमा नेकासित गरिएकोभन्दा पनि त्यो बेला देशमा कायम भएको निरङ्कुश राजतन्त्र वा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थालाई समाप्त गर्न गरिएको कार्यगत एकता र उक्त प्रश्नमा नेकासित कायम भएको नीतिगत समानता नै प्रधान पक्ष थियो । त्यसरी त्यो कार्यगत एकताको प्रधान पक्ष नेका नभएर निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्ने उद्देश्य नै थियो । गत चुनावमा एमाले वा माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीतिको प्रधान पक्ष पनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक उद्देश्यहरू नै थिए । एमाले र माओवादी त्यसका गौण पात्ररु थिए ।
पार्टीमा देखा परेको अनुशासनविहीनताका प्रवृत्तिहरूप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले चुनावका दौरानमा पार्टीको चुनावी तालमेलको नीति वा कतिपय ठाउहरूमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष उमेदवार वा प्रादेशिक सभाका समानुपातिकतर्फका उमेदवारहरूको खुला रूपले विरोध गर्ने कामहरू पनि भए । पार्टीका नीतिहरूको सार्वजनिक रूपले नै विरोध गर्ने कतिपय अवस्थामा देशव्यापी रूपमा ‘ह्विस्परिङ’ गर्ने कार्यहरू पनि भए । त्यसरी पार्टीभित्र देखा परेका अनुशासनविहीनताका प्रवृत्तिहरूलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुु पर्दछ र पार्टीभित्र अनुशासन र एकताको वातावरण तयार पार्न प्रयत्न गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
पार्टीभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार वा मतभिन्नतालाई पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई हाम्रो पार्टीले कहिल्यै पनि रोक्ने गरेको छैन । तर त्यो कार्य पार्टीको विधान र नियम अनुसार अनुशासित प्रकारले नै हुनुपर्दछ । पार्टी अनुशासनको ख्याल नगरिकन एकतर्फी रूपमा पार्टी नेतृत्व वा नीतिहरूको विरोध गर्ने वा कामका दौरानमा पनि एकता कायम गर्ने कार्यमा ध्यान दिइएन भने अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । त्यो अवस्थामा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नरहेर वुर्जुवा पार्टीमा बदलिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हामीले एकातिर पार्टी सदस्यहरूको जनवादी अधिकार, अर्कातिर, पार्टी अनुशासनको रक्षाका लागि सबै पार्टी सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ । अहिले पार्टीमा जनवादलाई कुण्ठित गर्ने कुनै कार्य गरिएको छैन । तर अनुशासनको प्रश्नमा कैयौँ कमजोरीहरू देखा पर्ने गरेका छन् । कतिपय पार्टी सदस्यहरूमा पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने वा खुला रूपले नै आफ्ना मतभेदहरूलाई बाहिर लैजान पाउने स्वतन्त्रतालाई नै जनवाद सम्झने सोचाइहरू पनि पाइन्छन् । तर जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तले एकातिर, जनवाद र अर्कातिर, केन्द्रीयता दुवैमाथि जोड दिन्छ । तर अराजकतावादी चिन्तन पद्धतिले ती दुवैमध्ये जनवाद वा छलफलको स्वतन्त्रतामाथि मात्र एकतर्फी रूपले जोड दिएर केन्द्रीयता र अनुशासनको विरोध गर्दछ । अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यस प्रकारको अराजकताको स्थिति ता पैदा भएको छैन, तर त्यस प्रकारका कतिपय प्रवृत्तिहरू भने अवश्य देखा परेका छन् । त्यस कारण समयमा नै त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूमा सुधार र नियन्त्रण गरेर जनवादी केन्द्रीयतका आधारमा पार्टी अनुशासन र एकतालाई कायम गर्न प्रयत्न गर्नु सबै पार्टी सदस्यहरूको दायित्व हुन्छ । धन्यवाद !